Sawirka khiyaaliga ah – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Sawirka khiyaaliga ah – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray maamulka | Nofeembar 30, 2021
The 2021 Beddelka Ciyaarta ugu Fiican ee Google Play gudaha Hong Kong, Macau iyo Taiwan, Ciyaarta mobaylada ee bilaa-fudud ee-mawduuca-maahmaah-maah-maaheedka ugu horreeya abid, Sawirka khiyaaliga ah ayaa u yimid qaab ahaan! Halkan, waxaad noqon doontaa maandooriyaha’ sayid, oo ay la kulmaan tacabur cajiib ah adduunkooda yar.
3D sheeko yar
Bandhiga Jir ahaan Ku Salaysan (PBR) tignoolajiyadu waxay soo celisaa inch kasta oo ka mid ah jaantusyada oo leh sax sare, si fiican u soo bandhigaya muuqaalkooda maaddooyinka dhabta ah iyo iftiinka iftiinka.
URUR BOQOLAAL MUUQAAL AH
Dalbo si aad u iibsato a “Sanduuqa Indho-la'aanta” iyadoo hal qasabad ah, jeexi sanduuqa warqadda, oo ay helaan yaab, “Liiska rajada +200x Xulashada Sawirka” hab jihayn, mar dambe ma waayi doontid figuriyada aad jeceshahay!
Habka golaha bandhigga caadadii asalka ahaa, loo habeeyey si loo abuuro Aaga Otaku gaar ah oo gaar ah: Meel bannaan, sci-fi, da'da dhexe qalcaddii…boqollaal mawduucyo ah oo aad ka dooran karto!
KA QAADO DAGAALADA Istaraatiijiyada ah
Geli safafkaaga 3×3 Xarig, halkaas oo aad ku dhejin karto daboolka booska, eeg animations kama dambaysta ah oo gaar ah, oo ay galaan xeelad dagaal oo lagu soo bandhigay qaab 3D ah. Isku day isku darka shanta nooc si xor ah. Isku qas oo isku dheji Difaacayaasha, Vanguards, Maleeshiyaadka, Caawiyaasha iyo Khabiirada ku jira safkaaga.
CIYAAR FUDUD OO CIQAAL AH
“Si dadaal la'aan ah uga kasbato kheyraadka jaantusyada’ shaqayn, halkaas oo kheyraadkaagu ka buuxsami doono markaad hurdada ka toosto”. Ku macsalaamo hawl maalmeedka caajiska ah, heerarka caadiga ah waxaa lagu nadiifin karaa hal qasabad, Ilahaaga shaqo-la'aanta ah lama goyn doono markaad khadka ka baxdo.
Booqo warbaahinta rasmiga ah ee soo socota si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Fantasy, Figure
← Rocket League Sideswipe – Khiyaamo&Hack Nasab2M – Khiyaamo&Hack →
Shot Online: Golf Battle – Khiyaamo&Hack
Niffelheim – Khiyaamo&Hack
FreezeTag Online – Khiyaamo&Hack
DC Legends: Fight Superheroes – Khiyaamo&Hack
EA SPORTS™ UFC® Mobile 2 Khiyaamo&Hack
Transformation 3D – Khiyaamo&Hack
Angry Birds Journey – Khiyaamo&Hack
Te Reo Māori/mi/figure-fantasy-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/figure-fantasy-cheatshack/